ANTSIRABE : Teratany frantsay iray mihetraketraka eny an-tsena jerem-potsiny
Jerem-potsiny ny fanjakazakana ataon’ny teratany fravtsay iray eto Antsirabe. 21 décembre 2016
Tsy vao sambany raha ny fanazavana fa matetika no efa manao ny ataony io lehilahy frantsay saingy tsy misy mandray fepetra mihitsy momba izany fa manao
ny ataony foana hatrany izy.
Raha ny zavatra nitranga ny talata teo dia nisakafo teo amin’ny toeram-pisakafoananairay teo ampitan’ny banky BNI ny tenany ary misy toeram-pivarotana goavana na itony « Centre Commercial », itony ao amin’ilay hotely avo be iray eo akaikin’ilay nisakafoanany. Amin’ny maha akaiky ny fety dia misy ny zavamaneno manao dokambarotra eo. Tezitra noho izay ranamana ka nobatainy ary nopotehiny ilay “Bafle” iray ary nikasa hibata ny iray indray izy no notanan’ny mpiambina ilay toeram-pivarotana.
Raikitra ny sakoroka ary nokendainy ilay mpiambina ary nisy mpitari-posy iray saika hanampy ilay mpiambina ihany koa nodarohan’ilay vazaha. Efa saika raikitra
ny fitsaram-bahoaka no niditra an-tsehatra ny mpitadro filaminana iray nandamina ireo olona vao nitsahatra izany. Nambaran’ny tompon’ilay hotely goavam-be moa fa tsy vao sambany no nanaovan’io vazaha io fihetsika toa izao, ka tsy hanaiky intsony izy satria mpiambina ny hoteliny ilay voakendan’ilay vazaha.
Ho hita eo indray hoe hatraiza ny fetran’ity resaka ity.